Junedin Sadoo Saboontoota Oromoo hunda wajjira Oromiyya keessa Argii’achuun Habashota akka Oromoo saaman waan goodheef qaba; kutaa 7faa
Amaa kan Ambo Hotela Jibatiif Maccaa jala ta’een wayee ajeefamuu Muamar Gaddhaf dhaggefachan ture. Ijii koo fi saamuun koo amo Hotela obbo Dararaa Kafanii irra jira. Gaafa Abbaadulaa Gemeda, Dhaabaa Dabalee, Baacaa Dabalee kkf ummataa Ambo bakka akka titisa ykn sareeti ajeesisa turantii dhufan yamuu gafatamantuu samuu koo keessa adeema. Murtii isaan argachuu qabanin yaada ture. Gumma Dararaa Kanafanii guyya saffa basuu qabna. TPLF/OPDOn Ambo, Wellega fi Gondarn akka jiban adunya kana irrati waan jiban hin qaban. Miseensoon fi Ministeron TPLF Bushoftuu fi Adamaa yamuu torban torbanin deeman Ambo garuu ijan arguu hin feedhan. Dirre Kuba miila amaya kan Magalaa Ambotii akka ijaramuuf Federeshiin kuba miila Africa Malaqa Miliyoona heeduu kan latee Junedin Sadoo fi Aster Mamoo, Tashomee Toga Waliin dubatan Bahirdariiti biyya Amharatii akka ijaramuu goodhan, haqa kana Junedin hin kaduu, nami hiimimman busee bo’ee ni jira. Aster Mamo, Junediin Sadoo faa waan itti gafataman heeduu akka jokkertii ka’ameef jira. Hotela Deraraa Kafanii, Ababechi Mataferirya, Jibatiif Maccan OPDOn akka diinatii ilala turan, namoota murasdee irra kan hafee. Ethiopia Hotelii Ambo utuu Oromoo Ambo Meeqa jiruu Guragee barbadan santiiman itii gurguratan, Bishan Ambo tola namaf keenan jeechuu nani danda’aa. Gaafi tokko hunduu murtee isaa ni argata. Oromoof waan ani waada galuuf yoo jirte murtiin TPLF/OPDO gaafi tokko hundi isaa diigamee yakkan ittigafatamuun isaani akka hin olee ragga galmeese darbuun feedha. Maliif Wayee Junediin Irrati xiyyefatee kan jeedhuu gaafi na dhiyyateef Oromoo TPLF diina keenya jala hiriree hunda isaan gara fula duratii nan dhiyeessa garuu Junedin Sadoo yakka gudda nama dalagee, Oromoo gandan qooduu kan egalee, Oromiyya saamuu fi Saamsisuu kan barsisee fi kara saqee fi akka Kondomii waan argameeti kan diiramuu waan ta’eef.
a. Siirna Wayyanee keessati Mootummaa TPLF hin xuuqiin malee malamaltumman yakka akka hin tanee namooni heedun biyya ba’aan ibsaan jiru, kun amoo dhugadha. Melese Zenawi ooganoontii hundi malamaltummaa akka baran kan goodhee mata isaa fi hadha mana isaati, oogannoon OPDO akka lammii isaan ajeesansi ni dirqisifamuu, maliif samicha fi lammi of ajeesuu barsisuu yoo jeetan, sababa lamaf nama barsisa Melese Zenawii:-
1. Namii hatee ija hin jabatuu, waan ajeejamee hunda rawwata, malaqa fi qabeenya hunda waan qabuuf mootumman suun akka turuu waan hundan deegera; dhaabbii biroon ala yoo dhufee akka isaa irra fudhatuu waan beekuuf siirna TPLF ni tiiksaa jeedhamee amana.
2. Nama Oromo ajeese yoo mootumman kun galgalee Oromoon akka isaa gafatuu waan beekuf Oromoo waliin diina ta’ee Melesf ajeejamee hanga Melesan jiratutii jiratee baduuf dirqama. Fakkenyaf Abbandula Gemada baran Germanyti yaalamuu deemee baduuf jeedhamee ture, garuu Dhiigii Oromoo harka isaa keessa waan jiruuf muratee baduu dadhabee deebiyee galuuf dirqamee, baduuf ka’ee deebiyuun isaa amoo hanga tokko Melesen faa akka dubii isaa qabaneessan goodhe malee hin oluuf, Yeregal Aishashum Perzdaantiin Benshangul Gumuzi Oromoo 400 ajeesise, 16,000 mana isaa fi qabeenya isaa samsisee akka buu’qan goodhe ergasii booda Yaalamuuf ala ba’ee baduuf ture, garuu gara na lafiinuu lata jeedhe deebiyee galee. Nami kun Samichaa hama ummataa Beneshangul irrati gegesee caalaa Oromoo fi Gumuzi Naggan waliin jiratuu dirqama Melese Zenawi fudhatee Gumuziin hidhachisee Oromoo ficisisun isaa ni yadatama.
b. Junedin of amanta dhabuu irra kan ka’ee Oromumma isaa dhisee laga fi amntan yerro jalqabaf of ijaree;
Oromoon waan beekuu qabuu Junedin Sado (OPDOn TPLF) ykn OPDOn Ginbot 7 Minisota nama Oromumman ijaruu dhisaan laga fi amantan ijarauun malatoo dandeeti dhabina isaanti. Nami dandeetii hin qabnee oftii hin amanuu, kanaafuu fira diiga isaa, ijoolee ganda isaa, namoota amanta tokko waliin qabuu of jalatii guurachuu egala, malatoo kana yamuu argitan namii kun dadhaba, kijiba ta’uu isaa beeka. Junedin Sado Perezdaant Oromiyya akka ta’een Tadasee Ganaa Ittiigafatama Wajjira Preezdaanti Goodha Tadasee Gana jeechun abba isaatuu Junedin Sadoo gudisee, Protokal Saganta fi Marii qoophesitoon amoo Barsisa Junedin Sadoo Asagidi fi Dubartii fira isaa tatee tokko lachuun isaan Afaan Oromoo Jeechaa tokko kan hin beekan, Bulchinsa Olana wajjirchaa amoo Dr. Meshesha Shawaaraga goodhe jarii kun sadanuu(3) isaan Oromo miti ijoolee ganda Junedin sadooti malee. Junedin Sado Oromoo Millona 50 keessa beeka dhabee Mootumman Nannoo Oromiyya gutaman gutuuti wajjira Gala Gaday goodhe ture. Wellega fi Lixii Shawwa hundi ABO waan ta’aanf gamoo Mootuumma kana irra fagachuu qabuu jeedhaman hundi isaan guyya tokkoti xalaya 200 ol rabsameef akka wajjira hojeetoota mootumma Oromiyyati deema jeedhaman. Namii wagga 30 tajajilee fi muxannoo Oganumaa wagga dheeraa qaban akka Bafaqaduu Jireenya Hararge Masalatii ramadamee nami kun sabiqunammtii (Pubilic relation) baratee wagga 30 hojeete Aanna Masala Hararge deemee mali hojeeta lata?? deebin isaa Junedinf. Bafaqaduun demuu didee qaban hidhan dararama gudda irran ga’aan, achii bayee Riftvally Collage barsisa ta’ee Junediin faa achi deeman arsisisan,Bafaqaduu Jirenya jijiruuf jirenya dhorkamee biyya ba’ee maatii isaa, ijoolee fi hadha mana isaa dhisee biyya baqatee. Baqale Jirata Digaliif Xichoo Arsi, darbatame, Tafara Nasagi Jundedin fi Hadha Mana Dhaabaa Dabaleetuu ABO jeedhe hidhati darbee, kkf itiifee, Qulquleesituu dha kasee hanga ittigaftamtoota Brooleeti hunda isaan ari’ee qulquleese. Dr. Asefa Gemeda Wajjira isaa utuu hin ga’iin alati xalya itti keenan furtuu konkolata harka fudhatan. Hundumtuu guyya sana gadee.
Hojeetoon wajjira sun hundi maliif akka kun goodhamuu yerros isaan hin galuuf ture, gaafa Junedin Saamuu fi Saamsisuu egaluu garuu dubiin hundaf galee jarii isaa mormuu danda’an hundi ququlan jiru, maqa isaani amoo degertoota ABOti jeedhama, garuu haqi jiru kana miti, namoon bayeen garuu Junedin Sadoo ABO dhaf miseensa bayee Horee jeedhu, goocha Junediin kana mormani warii biyya baqatani ABOtii galan bayiin isaan OPDOn ni beekti, Junedin ABO homishee qixeese jeedhe goorsaan Junediin tokko. Maliif kun ta’ee???
Malaqa Saamachuuf Projeeta hin to’atamnee hojeetan Junedin degertoota isaa Bobasee Fichee ti Hanga Asala fi Shashamaneeti lafa gurguruu egalee, torban torbani qaraxitii (boorsa) gudda isaa fudhatee dhaqee malaqa hamarachuu qoofa, waan nama gadisisu Mandisaa Magala Sabata Mimi jeedhatuu fi Shimalsi Kantiba Sabata lafa Sabata gurguruu irra darbani Magala biiroo gurguruu egalan Malaqa fudhan keessa 80 Junedin Sado, Alemu Simee, Adanechi Abebe, Dawannoo Kadiir kkf torben torben deeme gurata turan. Alemu Simee Biira Meetaa Aboo wajjira isaa goodhatee ture, foon dheedhi fi Gudari, Wiskyn Sabatati dhugamuu dhiiga Oromoo nati fakata, Junedin Jimata galgala ka’ee akka nama adamoo binensa adeemsuu Finfinnee ti kasee Qalitii, Bushoftu, Mojo, Zuway, Shashamane, Asala fi Adamaa irra deemee hanga qalqaloon isaa gutuuti malaqa sasabatee gala ture.
Abbandula Gemada, Dhaabbaa Dabalee, Bacaa Dabbalee amoo Gafarsa dha kassani hanga Ambo, Sandafaa fi Welsooti kan isaanti, Burayuu fi Alem Gena Dhaabba Dabalee fi Abba Dulatuu gurgurate qixeese, Dhaaban booda Keessa Galana Nuressa qabatee Oromiyya gutuu gurgurachuuf ture. Dhaabban gaafa lafa fixee nama gurguruu egaluu Finfinneti geesan kaka Oromiyaa saamachuun dhibee jeenan utuu hin turiin Oromiyyati na deebsa jeedhe achii bayee. Nammota malamaltumman hidhaman 120 keesa dursee hidhamuu wara qaban Keessa Alemu Simee, Abbadula Gemada, Junedin Sado, Dhaaba Dabalee, Bacaa Dabalee, Dawwannoo Kadiir kkf alati hafuun amalee dubiin hin xumuramnee jeechudha. Namoon walaloon tokko tokoo OPDOn xiinoo waan saamanfi utuu TPLF saamitoon gurgudan jira OPDO qoofan maliif hidhamuu kun siiri miti kan jeedhan jiru, TPLF saamuu qoofa utuu hin tanee biyya gutuma ishee gurguran jiru, Chaina, India, Pakistan, Sauwdi Arabiyati gurguran jiruu kan beekuu qabuu garuu Hatuun qarshi 10 hatee ilee utuu Milioona argitee ni hatii, haani hanuma qixee adabamuu, OPDO hidha fi qarshiin Adabaman warii TPLF amoo gaaf tokko akka Co. Gaddhaaf lubun adabamuu, kanaafu 120 hidhamuun ni xinatee warii hafaan Alemu Simee, Abbandula, Junedin faa kkf hundi dadafan akka Yaregal Ashashigumuu hidhamuu qabuu, kun ta’uu bana Junedin fi Abban dula baduun isaan hin oluu.
Bulchinsa Magala Sabata keessa Oromoon yoo jirate Halilu Ifaa qoofa ture, Shimals fi Mimin xifuma afaan Oromoo isaani dubatuu dhaga’ee hin beekuu, isaan kan barbadaman saaman samsisuuf ture, malii saboonumman OPDO biirati edoo hin qabu, Mimin Malaqa Magala Sabatatii guratee bankii bakka hunda galachitee itti bayanan ROOTOO tii naquun ishee itti hin xinatuu, ishee ilee biyya alatii hin bafnee, Junedin Sadoo faa garuu malaqa biyya basaa jiru; Malasan kan ni beeka kara isaa iyuua alatii ergatuu waan Melesen hin beekne waan Ethiopia keessati hojeetamuu hin jiruu na amana. Shimalsi, Mimi fi Galana Nurasa qabsaoota OPDO cimmo ta’aan Junedinf, Wellegi fi Lixii Shawwa amoo nyatanii nyachisuu dhissan polotika iti bayiisan jeenan ABOtii isaan ramadee hunda isaan ariatee. Walumma Galatii Junedin Saboontoota hin jalatuu. Waan Hateef Harki isaa qulquluu miti, soban Oromoo yakkun hisisee hojii irra arisisee, baratoota 1000 ta’aan barumsaa irra arisisee Melesefa biirrati jalatamuuf waan yaduuf samuun isaa qulquluu miti ni jeeqama. Gazeexesitoota Oromoo hin amanuu hunda isaa ni shaka kan ini aman Tamasgen G/Hiwati qoofa, Tigre waan ta’ee amanama dha, Walgaii OPDO kan gabasuu qabuu Tamasgen G/Hiwati warii kan ni shakamuu, nama saboona hin tanee ykkn lammi biroof angoo hiruuf kan egalee Junedin Sadooti.
Abban Dula Gemada amoo Oromiyaa Xifumma Tigre goodhe. Oromiyya keessati kan daldalatuu Tigree, Gurage fi Amhara, Oromoon ABO jeedhame daldali isaa ni cufma. Oogannon wajjira Tigre, Gurage, Amhara yoo xiinatee Makoo, Gartookkee, jaldhuufa ta’uu qaba, Oromiiya keessati mudamuuf.
OPDO/Hareen Junedin Sadofaa maliif Zalalem Jamane Lixaa walggati, Silashii Godee Baha wellegati , Salamoon Ababe DambiDolo Wellegati, Derege Afsaw fi Demisee Shitoo Hooro Welegatii Angoo olanaf maliif filatan ??? Jarii kun 4 isaan iyuu Oromoo miti. Wellega ta’ee Oromoo qulquluu yoo ta’ee Bilisummaa Oromoo barbada ABO, WFDO ykn OBK ta’aa malee OPDO hin ta’uu, kan jeedhuu amanta OPDOtii. Oromoon OPDO/TPLF amanam miti mootumman habasha dhuffa darbatuu Oromo jiba. Guyya tokko ni dhufaa warii dhibamee, hidhamee, biyya ariatamee guyyan qee’ee isaati deebiyyan Habasha fi ergamtuu ishee of keessa qulqulessan ni dhufa. Kana hojiin OPDO/TPLF, OPDO/Ginbot7 ilee kanaaf jibina. Kana OPDO HAREE jeechuun. Abbadula Gemada rakkon keessan ABO waliin mali jeedhe guyya tokko gafadhen ture, deebin isaa ABO HAREE oftuu nun jeedhan jeedhe. Ani amoo ABOn OPDOn haree offtuu jeechun isaa siiri mitin jeedha ani. Hareen hojii gudda hojeetii, hareen mana ishee fi abba ishee ni beekti. OPDOn mana ishee hin beektuu, lammii ishee hin beektuu, firra ishee hin beektuu. Kanaafu OPDOn haree oftuu utuu hin tanee of ishee iyuu haree gadiin jeedha. Junedin Sadoo Malamaltumma, Ganduma, Isilamuma fi Ashkarumaa isaa mal fakataa? Kutaa 8faan ittifufaa.
Falmata Dhugga Ambo Oromiyaa irra